Samy tsy nisy nahatsindry tsihy fa nifamotoana mihitsy nifankahery sy nifanakalo hevitra. Tena tapaka ny tsinaiko ry Jean naheno fa nisy taminareo, hono, toa latsaka mbamin’ny tsy tokony ho latsaka mihitsy nandre iny vaovao iny satria ny antsasamanila aminareo mihitsy no hodakana atsy ho atsy. Dia inona indray izany izao ry Jean no hevitra amin’izany ? Mbola hikononkonona handoa ekôlazy indray sa hanaiky mora fotsiny amin’ny fanilihana ataon-drafôrsa sy ireo namana mahatoky azy ? Aza mihevitra intsony ny hiverina eo fa efa taonan’ny fanilihana izao fa tsy taonan’ny fiombonana intsony a ! Fankasitrahana anareo, hono, mantsy no antony mbola hanomezana fahafaham-po anareo faramparany fa atsy ho atsy ianareo dia halefa hanamaro isa an-dry betatasika, ka rehefa tsy mahovoka amin’ny fifanandrinana amin’ny ngeza indray Rafôrsa sy ny ekipany amin’ny fifidianana ho avy vao mody hantsoina sy ho tambatambazana indray ianareo. Ianareo, hono, mantsy toa tsipazana seza toy ilay karazam-biby tsipazana taolana dia mirangorango, ka tsy sarotra hambakaina e ! Dia tsy mba hanana hambom-po mihitsy ve ka na efa hampitoviana amin’ny biby aza dia mbola hanaiky lembenana ? Mba menatra e !